I-Lace eyenziwe ngokwezifiso ibhegi yokuthenga, abavelisi kunye nabaxhasi - i-Dongguan Yihua Handbag Co., Ltd.
Sitsalele umnxeba +86-13580997100
Sithumelele i-imeyile Sales@handbagcn.com
Nylon ibhegi ibhegi
Ikhaya > Ingxowa yokuthenga Ingxowa yokuthenga > Intambo yokuthenga ibhegi
Ibhegi yokuhamba egxeni
Ikhithi yokucheba iinwele
Ingxowa yomlomo we-cosmetic
Intambo yokuthenga ibhegi
Umaleko ophindwe kabini, uthambile kwaye ulula, usongeke, kulula ukuwamkela.
Umtya wentambo yeBhegi
1.Product Parameters of Umtya wentambo yeBhegi
Ukuthenga, ukuzonwabisa, ukuhamba
Umbala, ubungakanani, ilogo, izinto eziphathekayo
Iteyiphu yekhadibhodi (enokwenziwa ngokwezifiso)
I-Dongguan Yihua Handbag Co, Ltd. igxile kwimveliso yeebhegi, izikhwama, oobhaka, iibhegi zokwenza, izixhobo, njl.
Uyilo oluhle, umsebenzi omhle, ukuhanjiswa kwexesha, nguMntla Melika, iYurophu, iJapan, iKorea namanye amazwe kunye nabathengi bengingqi.
Ukupakisha: 1 iiPC / iplastiki, ii-20 iiPC / ibhokisi; okanye ngokweemfuno zabathengi.
1.Ulwandle: ukuba ubungakanani bempahla bukhulu kwaye uyabufuna ngokungxamisekileyo, ungakhetha ukuthutha ngolwandle ukonga imithwalo ethile, ethatha malunga nenyanga;
I-2.Express: sihambisa iimpahla nge-UPS / DHL / FEDEX / TNT express, ungafika ngaphandle kokuphuma, kufuneka iintsuku ezi-3 ukuya kwezi-5 zokufika;
Imithwalo yemithwalo ye-3: sinokukunceda nokuthuthwa kwomoya, kuya kufuneka uye kwisikhululo seenqwelomoya ukuhambisa iimpahla ekhaya, kuya kuthatha iintsuku ezi-2 ukuya kwezi-7; nokuba yeyiphi na indlela yokuhambisa, kuxhomekeke kwiimfuno zakho zokwenyani.
1.Sibonelela ngenkonzo ye-OEM. ilogo yesiqhelo / i-hangtag / ukupakishwa kwentengiso njl.
Iinkqubo zesiko zibandakanya: ukuprinta kwescreen, i-Emborideryã € i-Deboss / iilebhile ze-Embossã zeelogo, iimveliso zentsimbi, iLaser.
2.We ungenza ngokusesikweni ngokwemveliso yakho / iinkcukacha / isampuli yesalathiso njl.
3.Ukuba unayo imfuneko yovavanyo, sinokulungiselela uvavanyo lwakho.
1: PoUmzi mveliso wesikhwama esinamandla, inzuzo yexabiso;
2: Iimveliso zingenziwa ngokwezifiso kwaye ziveliswe;
3: Uqinisekiso lomgangatho: Ukuba kukho ingxaki esemgangathweni, inokulungiswa okanye yenziwe simahla.
4: Yiba ngumthengi we-VIP kwaye ubonelele ngeesampulu simahla;
5: Ngaphezulu kweminyaka elishumi yamava oshishino, umzi-mveliso uneemodeli ezininzi zesalathiso sabathengi.
Q1: Ngaba ungumzi-mveliso okanye inkampani yorhwebo?
singumzi-mveliso. Njengomenzi weebhegi zobuchwephesha, siyaxhasa i-OEM kunye ne-ODM
I-Q2: Bobuphi ubuncinci be-odolo yobungakanani?
Ubuncinci bobungakanani beodolo ngama-300 / isiqwenga / umbala.
Q3: njani malunga nentlawulo yesampulu?
Kwintsebenziswano yokuqala, kufuneka sibize iisampulu kunye neefizi zokuhambisa. Intlawulo yesampulu iphindwe kabini, isiqingatha sayo siya kubuyiselwa emva kokuba iodolo iqinisekisiwe kwiibhetshi. Umrhumo wokuvula umngundo uhlawuliswa ngokwahlukeneyo.
I-Q4: Uqinisekisa njani umgangatho wakho?
Sineenkqubo ezingqongqo zolawulo lwempahla eluhlaza kunye nenkqubo yolawulo lomgangatho olungqongqo.
Q5: Leliphi ixesha lokuhambisa?
Ihlala ithatha iintsuku ezingama-30-40 emva koku-odola kunye nokuqinisekisa iisampulu. Ixesha elithile lixhomekeke kubungakanani beodolo.
Iimpawu ezishushu: Ibhegi yokuthenga ngentambo, eyenziwe ngentando, kwiFektri, abaenzi kunye nabaxhasi
Mesh ibhegi yokuthenga
Iingcebiso zokulondolozwa kwengxowa ongazaziyo2021/04/30
Kuyatshiwo ukuba iingxowa zizithandwa zesibini zowasetyhini, ke kufuneka sisiphathe njani "isithandwa" sethu? Emva kokuthenga ibhegi, ngakumbi iingxowa ezibiza kakhulu ezithengwa ngexabiso eliphezulu, kuyafuneka ngakumbi ukuba wazi iindlela ezichanekileyo zokugcina. Ukuba asiyiphathi kakuhle, iya ku......
Ukudibana okuncinci kukufundisa ukugcina iingxowa ukugcina indawo2021/04/30
Uzigcina kanjani iibhegi zihlala ziyintloko kubafazi, kuba iingxowa zahlukile kwimpahla kwaye azinakusongwa, ngenxa yoko kufuneka indawo eyaneleyo yokugcina iingxowa. Kodwa ayinguye wonke umfazi onokuba nayo ikhabethe enkulu yokugcina iibhegi. Namhlanje ndiza kwazisa ngeengcebiso ezimbalwa zokugcina......
Iimfihlo zeengxowa zokuthambisa zamantombazana2021/04/30
Amantombazana amaninzi athanda ukhathalelo lolusu nokunxiba anokhetho olunzima ngalo lonke ixesha esiya kude. Bafuna ukuza nazo zonke iintlobo zeebhotile kunye neenkonkxa, kwaye abanakulinda bazise ibhegi yesikolo encinci.
Abasetyhini bakhetha njani iibhegi?2021/04/30
Amadoda jonga iwotshi, abafazi jonga ibhegi! Ingxowa iye yaba yinto ekufuneka yenziwe kuyo yonke iMM yokunxiba, kwaye ikwaluphawu lwesazisi kunye nencasa. Abantu banamawaka obuso, kwaye kukho amawaka eentlobo ezahlukeneyo zeephakeji. Ubume, izitayile, kunye nemibala ziyakhazimla, kwaye ukudityaniswa......
Ngaba unokuqhagamshelana nathi ngayo nayiphi na imibuzo. Ixabiso lethu kunye nenkonzo ngokuqinisekileyo ziya kwanelisa.
Hayi 179, Huancheng Street, Shimei Youyi Road, Wanjiang District, Dongguan City